निवर्तमान (Nibartaman) ||: एसएलसी कुनै तगारो वा हाउगुजी होइन !
त्यसो त पर्याप्त तयारीबिना नै ग्रेडिङ्ग पद्धती अवलम्बन गर्न लागिएको भन्दै कतिपय शिक्षाविद्हरुले असन्तुष्टि पनि जनाइरहेका छन् । तर, पनि यो प्रणालीले कम्तीमा विद्यार्थीलाई असफलताको हिनताबोधबाट मुक्त गर्ने हुँदा यो पंक्तिकार भने व्यक्तिगत रुपमा यसको पक्षमै छ । साथै आशा गर्न सकिन्छ कि, यस पटक विगतमा झैं एसएलसीले आधाभन्दा बढी विद्यार्थीहरुलाई 'असफलता' र 'अयोग्यता' को प्रमाणपत्र भिडाउने छैन र ती तल्लो ग्रेड प्राप्त गर्ने विद्यार्थीहरुसँग पनि जीवन जिउने आफ्नै कला छ । उनीहरुले पनि यो समाज र राष्ट्रलाई आफ्नो श्रम र सीपमार्फ केही न केही योगदान गर्न सक्नेछन् । अनि उनीहरुभित्र भएको प्राकृतिक क्षमताको मापन तीन घण्टामा दिइने केवल एउटा परीक्षा मात्र होइन । पारम्परिक रुपमा झैं जीवनभर अयोग्यताको बिल्ला भिरेर बाँच्नुपर्ने छैन । अनि कतिपय विद्यार्थीले विगतमा झैं आफ्नो घर, परिवार र समाजबाट आफू अयोग्य प्रमाणित भएको पीडा सहन नसकेर यो अमूल्य जीवनकै अन्त्य गर्ने शृंखला सदाका लागि अन्त्य हुनेछ ।
आशा गर्न सकिन्छ कि, यस पटक विगतमा झैं एसएलसीले आधाभन्दा बढी विद्यार्थीहरुलाई 'असफलता' र 'अयोग्यता' को प्रमाणपत्र भिडाउने छैन र ती तल्लो ग्रेड प्राप्त गर्ने विद्यार्थीहरुसँग पनि जीवन जिउने आफ्नै कला छ ।
हाम्रो सर्न्दर्भमा एसएलसी परीक्षालाई समाज र राज्यले नै यतिधेरै उच्च महत्वका साथ प्रचार गरिरहेको छ, जुन वास्तवमै बेठिक हो भन्ने लाग्छ । थाहा छैन आखिर दस कक्षाको वाषिर्क परीक्षलाई किन र केका लागि यतिधेरै महत्व दिईंदै छ - उच्च शिक्षाकै कुरा गर्ने हो भने एसएलसीपछि बल्ल त्यसको अध्ययन सुरु हुन्छ । आखिर प्रत्येक विद्यार्थी दस कक्षा भन्दा तलका कक्षाहरु पास गर्दै दसमा पुगेको हुन्छ । अनि अन्य कक्षाहरुको वाषिर्क परीक्षाको सर्न्दर्भमा कुनै प्रचारवाजी गर्नु नपर्ने, अनि दस कक्षाकै विषयमा यतिधेरै प्रचारवाजी किन - आखिर त्यसरी गरिने प्रचारवाजीले पनि विद्यार्थीहरुलाई एक प्रकारको मनोवैज्ञानिक डर सिर्जना गरिदिन्छ र त्यसकै कारण उनीहरु परीक्षा बिगार्न पुग्छन् । अनि घरपरिवारले पनि एसएलसी भनेको ठूलै हाउगुजी हो झैं गरिदिन्छ र उसको शैक्षिक सत्र सुरु भएदेखि नै यति प्रतिशत र उति प्रतिशत ल्याउनर्ुपर्छ भन्दै उसलाई प्रतिशतको टार्गेट दिइन्छ । अनि वर्षदनभर त्यो विद्यार्थी त्यही टार्गेटको भारीले किचिन पुग्छ ।
एसएलसी परीक्षाको नतिजामा गर्न लागिएको सुधारसँगै अब घर, परिवार, समाज र राज्यले पनि एसएलसीलाई दिएको अनावश्यक महत्वलाई कम गर्नुपर्छ र विद्यार्थीलाई मनोवैज्ञानिक रुपमा तर्सर्ााे खेल अन्त्य हुनर्ुपर्छ । यसो भन्दै गर्दा के त्यसो भए के एसएलसीको कुनै औचित्य नै छैन त - भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्छ । निश्चत रुपमा एसएलसीको कामै छैन भन्ने होइन । तर, यसको सुधार हुनर्ुपर्छ । एसएलसी परीक्षाको बुझाई परिवर्तन हुनर्ुपर्छ । यसलाई फगत कक्षा दसको वाषिर्क परीक्षाकै रुपमा लिइनर्ुपर्छ, नकि जिन्दगीकै परीक्षा । यसलाई कथित 'आइरन गेट' को हाउगुजी बनाइरहनु आवश्यक छैन । वास्तवमा हामीले एसएलसी परीक्षालाई अनावश्यक रुपमा विकराल बनाइरहेका छौं र प्रत्येक वर्षयसको महत्वलाई अनावश्यक रुपमा उचालिने काम भएको छ ।
एसएलसी परीक्षाको बुझाई परिवर्तन हुनर्ुपर्छ । यसलाई फगत कक्षा दसको वाषिर्क परीक्षाकै रुपमा लिइनर्ुपर्छ, नकि जिन्दगीकै परीक्षा । यसलाई कथित 'आइरन गेट' को हाउगुजी बनाइरहनु आवश्यक छैन ।
मिडिया, स्कूल, कलेज, कार्यालय, चियापसलहरुमा एसएलसीको नतिजालाई लिएर गरिने टिकाटिप्पणी र विमर्शले पनि एसएलसी हाउगुजीको रुपमा स्थापित भएको हो । अनि कथित दस वर्षो मेहनतको रुपमा एउटा एसएलसी परीक्षा पास हुनुलाई लिने गरिएको छ । यसले गर्दा विद्यार्थीहरुमा अनावश्यक डर र त्रास पैदा हुन पुग्छ । विद्यार्थीलाई एसएलसी भनेको एकदमै डरलाग्दो हाउगुजी हो भन्ने मनोविज्ञान समाजले भरिदिएको छ । एसएलसीमा पास हुन नसकेको खण्डमा जीवनका सबै मार्गहरु अवरुद्ध हुन्छन् जसरी प्रचारवाजी गरिएको छ । त्यसले गर्दा विद्यार्थीहरु अनावश्यक रुपमा तनावमा रहन्छन् । तर, जीवनको यथार्थ एसएलसी मात्र होइन, यथार्थको अर्को पाटो पनि त छ ।
एसएलसी सुधारसँगै अब कम्तीमा यस प्रकारको मनोवैज्ञानिक त्रासलाई हटाउनु जरुरी छ । यस मानेमा अब शैक्षिक पुनःसंरचनाको आवश्यकता देखिएको छ । नेपालको शिक्षा प्रणाली अलि बढी सैद्धान्तिक र कम व्यवहारिक छ । युवाहरुलाई उनीहरुको दक्षता र क्षमता अनुसारको रोजगारीको व्यवस्था गर्न नसक्दा उनीहरुमा निराशा बढ्दै जाने र अन्ततः उनीहरु आपराधिक मनोवृत्तिका हुने संभावना पनि बढ्दै जान्छ । यर्सथ, मुख्य कुरा मुलुकमा सबै युवाहरुलाई आआफ्नो सीप, दक्षता र क्षमता अनुसारको रोजगारीको अवसर सृजना गर्नु नै हो । यदि हामीले ठूलो स्केलमा मुलुकमै रोजगारका अवसरहरु सृजना गर्न सक्ने हो भने त्यसले एक त रोजगारीका लागि विदेशी भूमिमा रगतपसिना बगाउन जानेहरुको संख्या घट्नेछ भने अर्कोतर्फमुलुकको आर्थिक विकासका लागि पनि स्पष्ट ढंगबाट मार्ग प्रशस्त हुनेछ ।
युवाहरुलाई उनीहरुको दक्षता र क्षमता अनुसारको रोजगारीको व्यवस्था गर्न नसक्दा उनीहरुमा निराशा बढ्दै जाने र अन्ततः उनीहरु आपराधिक मनोवृत्तिका हुने संभावना पनि बढ्दै जान्छ । यर्सथ, मुख्य कुरा मुलुकमा सबै युवाहरुलाई आआफ्नो सीप, दक्षता र क्षमता अनुसारको रोजगारीको अवसर सृजना गर्नु नै हो ।
तर, आशातित् रुपमा यसो हुनु नसक्नुको पछाडि विद्यमान शैक्षिक प्रणालीकै दोष देखिन्छ । हामीले हाम्रा विद्यार्थीहरुलाई कहिल्यै पनि जीवनउपयोगी सीप सिकाएनौं । विद्यार्थीहरुलाई केवल पाठ घोकाइयो तर सीपमूलक शिक्षा दिइएन । उनीहरुले हरेक कुरा कण्ठस्त पारे तर, सीप सिकेनन् । उनीहरुलाई केवल पढाउने काम भयो, तर सिकाउने प्रयत्न भएन । त्यसो त हामीले कहिल्यै पनि आफ्ना नानीबाबुहरुलाई आलोचनात्मक दृष्टिकोण राख्नै सिकाएका छैनौं । आलोचनात्मक चेत नहुँदासम्म विद्यार्थीले सिक्न सक्दैनन् । तर, आलोचनात्मक चेतको विकास हुन सकेको छैन । अझ साँच्चै भन्नुपर्दा यो समाजमा आलोचनात्मक चेत बन्देज नै छ । यहाँ आलोचनात्मक चेतलाई अस्वीकार गरिन्छ र नै विद्यार्थीहरु पनि केवल पाढ घोक्न अभिशप्त छन् ।
अनि हाम्रो शिक्षा प्रणाली केवल एकोहोरो पद्धतीमा आधारित छ, जहाँ शिक्षक/प्राध्यापकले एकोहोरो सैद्धान्तिक लेक्चर पिलाउँछन् र विद्यार्थीहरु त्यसैलाई कण्ठस्थ पार्छन् । ससानो कक्षादेखि नै विद्यार्थीहरुलाई कहिल्यै पनि प्रश्न र प्रत्रि्रश्न गर्ने संस्कार नै सिकाइएन । घरमा, छिमेकमा, समाजमा जहाँसुकै पनि केवल 'ज्ञानी' बन्न सिकाइयो, प्रश्न गर्न होइन । केवल 'पर््रार्थना' गर्न र 'अनुशासित' बन्न सिकाइन्छ, प्रश्न गर्न होइन । आज पनि हामी आफ्ना नानीबाबुहरु कम बोलेको कुनै विषयमा प्रश्न र प्रत्रि्रश्न नगरेकै जाती मान्छौं । यसले गर्दा उनीहरुको उचित व्यक्तित्व विकास हुन सकेको छैन र उनीहरुले जीवन र जगतलाई आलोचनात्मक दृष्टिकोणबाट कहिल्यै हर्ेन जान्दैनन् । त्यसको परिणाम के भइदियो भने उनीहरु युवा अवस्थामा प्रवेश गरेपछि विकल्पबिहीन अवस्थामा पुगे ।
हाम्रो शिक्षा प्रणाली केवल एकोहोरो पद्धतीमा आधारित छ, जहाँ शिक्षक/प्राध्यापकले एकोहोरो सैद्धान्तिक लेक्चर पिलाउँछन् र विद्यार्थीहरु त्यसैलाई कण्ठस्थ पार्छन् । ससानो कक्षादेखि नै विद्यार्थीहरुलाई कहिल्यै पनि प्रश्न र प्रत्रि्रश्न गर्ने संस्कार नै सिकाइएन ।
अब हाम्रो जस्तो कम साक्षरता प्रतिशत भएको मुलुकले शिक्षामा प्रशस्त लगानी गरेर यसलाई सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक रुपान्तरणको मेरुदण्डको रुपमा विकास गर्नुपर्छ । विगतमा शिक्षामा राजनीति मात्रै भयो । अब पनि उही पुरानै र्ढराको सोंच, विचार, चिन्तन र कार्यशैली अपनाएर अगाडी बढ्न खोजियो भने त्यो निर्रथक हुनेछ । मुलुक नयाँ युगमा प्रवेश गरिसकेको सर्न्दर्भमा नयाँ सोच, विचार र चिन्तनका साथ नयाँ लक्ष्य निर्धारण गरेर नयाँ शिक्षाको आवश्यकता पहिल्याउनर्ुपर्छ ।
अहिले हामी राज्यको पुनःसंरचनाको पर्खाइमा बसिरहेका छौं । यर्सथ, अबको नयाँ शिक्षा प्रणाली र शिक्षा नीतिको बारेमा खुलेर बहस हुन सक्यो भने भोलिका दिनहरुमा अहिलेको समस्या हट्ने थियो । यस दिशामा अबको बहस केन्द्रित हुनु जरुरी छ । आखिर राजीतिक स्थायित्व र आर्थिक विकासका लागि पनि उचित र व्यवहारिक शिक्षा जरुरी हुन्छ नै । फेरि हाम्रो समाजमा दर्ुइथरी शिक्षा छ, एउटा हुनेखानेहरुका लागि र अर्को हुँदा खाने गरिब र निम्नवर्गका लागि । यस प्रकारको दर्ुइथरी शिक्षाले पनि गुणस्तरमा फरक पारेको छ । यर्सथ, वर्तमान पर्रि्रेक्ष्यमा मुलुकको शैक्षिक अवस्था कस्तो छ - यस क्षेत्रमा विगतमा के कस्ता कमीकमजोरीहरु भए जसले गर्दा मुलुकको शैक्षिक अवस्था दयनीय बन्न पुग्यो - विद्यमान शैक्षिक नीति समयानुकूल छ कि छैन - भन्ने जस्ता ज्वलन्त विषयवस्तुहरुमा सूक्ष्म अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषण हुनु जरुरी छ ।
दर्ुइथरी शिक्षाले पनि गुणस्तरमा फरक पारेको छ । यर्सथ, वर्तमान पर्रि्रेक्ष्यमा मुलुकको शैक्षिक अवस्था कस्तो छ ? यस क्षेत्रमा विगतमा के कस्ता कमीकमजोरीहरु भए जसले गर्दा मुलुकको शैक्षिक अवस्था दयनीय बन्न पुग्यो ?
आमूल परिवर्तनको मजवुत र बलियो आधारशिला भनेको जीवनोपयोगी र व्यवहारिक शिक्षा नै हो । रोजगारको ढोका खोल्नको लागि पनि व्यवहारिक शिक्षा अत्यन्तै जरुरी हुन्छ । यदि अहिलेदेखि नै हामीले विद्यालयतहबाट व्यवहारिक शिक्षा प्रदान गर्न सकेको खण्डमा आजका बालबालिकाहरु भोलि बेवारिसे अथवा बेरोजगार भएर बस्नु पर्दैन । उनीहरु भोलिका दिनहरुमा स्वावलम्बी र स्वरोजगार बन्न सक्छन् । उचित, जीवनोपयोगी, व्यवहारिक र प्राविधिक शिक्षाले विद्यार्थीहरुलाई श्रम प्रति आस्था जगाउँछ, जुन आर्थिक समृद्धिको लागि महत्वपर्ूण्ा आधार हो । अब पनि यो तथ्यलाई मनन् गर्न सकिएन भने हाम्रो आगत पनि विगतजस्तै पश्चतापपर्ूण्ा हुने निश्चित छ ।